औषधालय इन्टरनेट मार्केटिंग र खोज ईन्जिन Optimizaton
औषधालय इन्टरनेट मार्केटिंग
कसरी तपाइँको मार्केटिंग डलर नयाँ ग्राहकहरु लाई ल्याउन को लागी ग्यारेन्टी गर्न।
त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन साना व्यवसायहरूले नयाँ ग्राहकहरू, रेडियो, टिभी, बिलबोर्ड, म्यागजिनहरू र औषधा इन्टरनेट मार्केटि including मार्फत ल्याउन विज्ञापन गर्दछ। भण्डार प्रबन्धकहरूले सामना गर्ने समस्या भनेको सही रूपमा विज्ञापनको कुन एवेन्यूले काम गरिरहेको छ भनेर बताउने छ। जब सम्म तपाईं ढोका भित्र आउने हरेक नयाँ ग्राहकलाई प्रश्न गर्नुहुन्न कसरी तपाईंलाई कसरी थाहा हुनेछ कुन विधिले ल्याउँदैछ, नयाँ ग्राहकहरू? यो जानकारी तपाईंको व्यवसायको विकासमा महत्वपूर्ण छ किनकि यसले प्रबन्धकहरूलाई के काम गरिरहेको छ भनेर बढी पैसा विनियोजन गर्न र मार्केटिंग योजनामा ​​पैसा बचत गर्दैन जुन काम गर्दैन। सबै ज्ञात मार्केटिंग विकल्पहरू मध्ये, गुगल मात्र एक हो जसले ग्राहकहरूको संख्यामा अपरिवर्तनीय डेटा दिन्छ जुन ईन्टरनेट खोजीको माध्यमबाट तपाईंको व्यवसाय खोज्दैछ। गुगलले मासिक गणना गर्ने ग्राहकहरूको संख्याको निश्चित गर्दछ जुन तपाईंको स्टोरमा प्रति महिना दिशा निर्देशन क्लिक गर्दछ। यो कति नयाँ ग्राहकहरु Google ले तपाईको व्यवसायलाई उपलब्ध गराईरहेको छ भन्ने सुन्दर सूचक हो र तपाईलाई मार्केटि investment लगानी बनाउने मुनाफामा फर्काउने गणना गर्न ठोस मेट्रिक दिन्छ।
हामी तपाईंलाई हाम्रा एक ग्राहकको उदाहरण देखाउँदछौं जो टाकोमा वाशिंगटनमा अवस्थित मनोरन्जन मारिजुआना औषधालय हो। तलको ग्राफिकमा हामी एउटा स्क्रिनशट प्रदान गर्दछौं जब ग्राहकले टाकोमा वाशिंगटनमा डिस्पेंसरीहरूको लागि खोजी गर्दछ र त्यसपछि ग्रीन कलर भांग चयन गर्दछ। शीर्ष दायाँ कुनामा कुनामा एउटा बटन हो जुन दिशा निर्देशनहरू भन्छ। एक पटक ग्राहकले त्यो बटन क्लिक गरेमा तिनीहरूलाई नक्शामा लैजान्छ जुन उनीहरूको हालको स्थानबाट सोझै तपाईंको व्यवसायमा दिशा निर्देशन गर्दछ। के अधिकांश व्यवसाय मालिकहरूले महसुस गर्दैनन् कि गुगल ट्रयाक राख्छ सँधै समय एक ग्राहक क्लिक कि बटन मा। न केवल ती बटन क्लिक गर्ने व्यक्तिको संख्या ट्र्याक राख्छन् तर उनीहरू ट्र्याक राख्छन् कहाँ तिनीहरू अवस्थित छन्। यो अमूल्य डाटा हो जुन कुनै अन्य मार्केटिंग विकल्पले प्रदान गर्न सक्दैन।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नको लागि केवल नयाँ ग्राहकले मात्र निर्देशन बटनमा क्लिक गर्नेछन् किनकी हालका ग्राहकहरूलाई पहिले नै थाहा छ धेरै जसो केसहरूमा तपाईंको व्यवसाय कसरी पत्ता लगाउँदछ। प्राय: औषधालयहरूको लागि बिक्री प्रति औसत ग्राहक प्रति ग्राहक dollars डलर जति हुन्छ। र म तपाईंलाई सम्झाउँछु कि यो त मात्र हो यदि ग्राहकले एक खरीद गर्छ र कहिले फर्काउँदैन र हामी हालको मेट्रिक्सबाट जान्दछौं कि मनोरन्जन मारिजुआना डिस्पेन्सरीमा 8० प्रतिशतको अवधारण दर छ जुन मूल्यमा वास्तवमा धेरै नै हो। हाम्रो लेख हेर्नुहोस्: औषधालयको मूल्य कति छ।
यस ब्रेकडाउनमा प्रस्तुत ग्राहकहरूको संख्या थपेर हामी यो व्यवसायको लागि गुगल खोजी मार्फत ल्याइएको ११२ new नयाँ ग्राहकहरूको साथ आउँदछौं। र यो ध्यानमा राख्नुहोस् कि यो केवल गुगलको लागि हो, यसले बिंग र अन्य खोज इञ्जिनहरू समावेश गर्दैन। जब हामी ११२ x x * 1129.०० गुणा गर्छौं भने हामी प्रतिमाह profit,, ०1129२ डलर प्राप्त गर्छौं। अब त्यो संख्या धेरै नै छ किनकि तपाईंको व्यवसाय खोजी गर्ने सबैले दिशानिर्देश बटन क्लिक गर्दैन। केहि ठेगानाहरू सीधा तिनीहरूको नेभिगेसन प्रणालीहरूमा प्रविष्ट गर्छन् वा तेस्रो पक्ष वेबसाइटबाट निर्देशनहरू प्राप्त गर्दछ। यस लेखको मुख्य बुँदा यो देखाउनको लागि हो कि नयाँ ग्राहकहरूको प्रवाहको ग्यारेन्टीको लागि खोजी ईन्जिन अनुकूलनमा लगानी सबैभन्दा तार्किक विकल्पहरू मध्ये एक हो। Google ले मात्र तपाईंलाई नम्बर प्रदान गर्दछ तर उनीहरूले तपाईंलाई स्थानहरू प्रदान गर्दछ जहाँ तपाईंको ग्राहकहरु आउँदैछन्। यदि तपाईंले आफ्नो शहरको क्षेत्र देख्नुभयो जुन तपाईं लक्षित पार्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंको एसईओ फर्मले थप कुञ्जी शब्दहरू थप्न थप राजस्व ल्याउन सक्दछ। सबै स्थानीय खोजीहरूको all percent प्रतिशत गुगलको साथ रहेको र यदि तपाईंको व्यवसाय पहिलो पृष्ठमा देखाइएको छैन भने ती सबै ग्राहकहरू तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूमा जाँदैछन्।
At Isenselogic.com हाम्रो SEO कार्यक्रमहरू 500 डलर महिनाको रूपमा शुरू हुन्छ र हामी हाम्रो कामको ग्यारेन्टी दिन्छौं। यदि हामीले तपाईंको ढोकाबाट आउने ग्राहकहरूको संख्या बढाएनौं जुन तपाईं गुगल कन्सोल मार्फत तपाईं द्वारा प्रमाणित गरिएको छ हामी कम संख्यामा तपाईंको आउने ग्राहक गणनामा हामी नि: शुल्क काम गर्नेछौं। हामीलाई आज नि: शुल्क एसईओ अडिटका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई एक निःशुल्क प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट र तपाईंको व्यापारको लागि कुञ्जीशब्द विश्लेषण प्रदान गर्नेछौं। एक $ 800 डलर मूल्य।
हाम्रो ग्राहकहरू गुगल परिणामहरू
लेफ्लाइ र वीडम्याप्सले कति चार्ज गर्छ?
औषधालय SEO तथ्यहरू